IATA dia maniry ny governemanta hanala ireo fanandramana PCR Covid lafo vidy
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » IATA dia maniry ny governemanta hanala ireo fanandramana PCR Covid lafo vidy
IATA: Ireo mpizaha tany mahazo fahatokisana, fotoana handaminana ny hanombohana indray
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia nanentana ny governemanta hanaiky ny fitsapana antigen haingana indrindra ao an-dakilasy ho fanatanterahana ny fepetra fitsapana COVID -19 taorian'ny famoahana ny fikarohana vaovao nataon'ny OXERA sy ny Edge Health.
Ny fahasalamana OXERA-Edge tatitra, natolotry ny IATA, dia nahita fa ny fitsapana antigen dia:marina: Ny fitsapana antigen tsara indrindra dia manome valiny azo oharina amin'ny fitsapana PCR amin'ny famaritana marina ireo mpandeha voan'ny aretina. Ny fitsapana antigen BinaxNOW, ohatra, dia tsy mahita tranga iray tsara fotsiny amin'ny mpandeha 1000 (mifototra amin'ny tahan'ny aretina 1% eo amin'ireo mpandeha). Ary manana fampisehoana mitovy amin'izany amin'ny fanandramana PCR amin'ny ambaratongan'ny fatiantoka diso.
mety: Ny fotoana fanodinana ny fitsapana antigen dia 100 heny haingana noho ny fitsapana PCR
vidim-mahomby: Ny fitsapana antigen dia, amin'ny antsalany, 60% mora kokoa noho ny fitsapana PCR.
Ny fanombanana ny fahombiazan'ny fitsapana haingana ho an'ny SARS-CoV-2 dia niteraka ity fanambarana manaraka ity:
“Ny famerenana amin'ny laoniny ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dia hanome hery ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena avy amin'ny COVID-19. Miaraka amin'ny vaksiny, ny fitsapana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanomezana fahatokisan-tena amin'ny governemanta hanokatra ny sisin-taniny ho an'ireo mpandeha. Ho an'ny governemanta, ny laharam-pahamehana dia ny fahamarinana. Saingy mila fitsapana ihany koa ny mpandeha mba ho mora sy mora vidy. Ny tatitra momba ny fahasalamana OXERA-Edge dia milaza amintsika fa ny fitsapana antigen kilasy tsara indrindra dia afaka mametaka ireo boaty rehetra ireo. Zava-dehibe ho an'ny governemanta ny mandinika ireo voka-pikarohana ireo rehefa manomana drafitra hanombohana indray izy ireo, ”hoy i Alexandre de Juniac, Tale Jeneraly sy tale jeneralin'ny IATA.
Miparitaka ny fepetra takiana amin'ny fitsapana ankehitriny, izay mampisavoritaka ny mpandeha. Ankoatr'izay, governemanta maro no tsy mamela fitsapana haingana. Raha ny safidy tokana misy ho an'ny mpandeha dia fitsapana PCR dia misy fatiantoka lehibe sy fahasahiranana lehibe ireo. Ary amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao, voafetra ny fahafahan'ny fitiliana PCR, miaraka amin'ny laharam-pahamehana voalohany omena amin'ny fampiasana klinika.
“Mila safidy ny mpandeha. Ny fampidirana antigen andrana amin'ireo fitsapana azo ekena dia azo antoka fa hanome tanjaka ny fanarenana. Ary ny famaritan'ny EU ny fitsapana antigène azo ekena dia manolotra làlana marimaritra iraisana amin'ny firindrana iraisampirenena amin'ny fenitra ekena. Mila mahita ny governemanta manatanteraka ireo tolo-kevitra ireo isika izao. Ny tanjona dia ny hananana andiam-pitsapana mazava tsara izay mahomby amin'ny lafiny ara-pahasalamana, azo idirana ara-bola ary azo zahana ho an'ireo mpitsangatsangana rehetra, "hoy i de Juniac.
Ny Eastern Airlines dia mampiasa vola amin'ny fahaiza-mizara vaovao
Fiaramanidina sy fahavelomana amin'izao tontolo izao: mahita fifandanjana maharitra